ट्विटरका प्रमुखकै अकाउन्ट, कसरी भयो ह्याक ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more ट्विटरका प्रमुखकै अकाउन्ट, कसरी भयो ह्याक ?
ट्विटरका प्रमुखकै अकाउन्ट, कसरी भयो ह्याक ?
भदौ १५ गते, २०७६ - ११:३७
एजेन्सी । ट्विटरका प्रमुख कार्यकारी ज्याक डोर्सीको ट्विटर अकाउन्ट ह्याक भएको छ । आफूलाई चक्लिङ स्क्वाड भन्ने समूहले डोर्सीको अकाउन्ट ह्याक गरेको हो । उनी ट्विटरका सहसंस्थापकसमेत हुन् ।
४० लाख फलोअर भएको अकाउन्ट ह्याक गरेपछि सो समूहले १५ मिनेटसम्म अपमानजनक र जातीय विभेदपूर्ण ट्विट गरेको थियो । ट्विटरले आफ्नो सेवा प्रणालीमा कुनै कमजोरी नभएको दाबी गर्दै त्यसमा एक मोबाइल फोन सञ्चालक दोषी भएको दाबी गरेको छ । ट्विटमा अश्वेत जातिलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिएको थियो भने अर्को ट्विटमा ट्विटरको मुख्यालयमा बम राखिएको जनाइएको थियो ।
‘मोबाइल सेवाप्रदायकको लापरबाहीले ट्विटर अकाउन्टका लागि प्रयोग गरिएको फोन नम्बरमा समस्या देखिएको थियो,’ ट्विटरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनधिकृत व्यक्तिले सो फोन नम्बर प्रयोग गरेर एसएमएस लेख्दै ट्विट गर्न सक्ने अवस्था बन्यो ।’ सो समस्या केही घन्टामै समाधान भइसकेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यसरी भएको थियो ह्याक ?
डोर्सीको अकाउन्ट ह्याक गर्न ह्याकरले सिमस्वापिङ भन्ने तरिका प्रयोग गरेका थिए । सो तरिकाअनुसार प्रयोगमा रहेको फोन नम्बरलाई नयाँ सिम कार्डमा सारिन्छ । त्यसका लागि ह्याकरले मोबाइल सेवाप्रदायकको ग्राहक सेवामा खटिने कर्मचारीलाई झुक्याउँछन् । नम्बरलाई नियन्त्रणमा लिएपछि ह्याकरले एसएमएस पठाएर डोर्सीको ट्विटर ह्याक गर्न सफल भएका थिए ।
आजभोलि ट्विटर चलाउन धेरै व्यक्ति मोबाइल प्रयोग गर्छन्, तर ट्विटरको प्रारम्भिक समयमा ट्विट गर्न एसएमएस गर्नुपथ्र्यो । सोही कारण ट्विटमा अक्षरको सीमा तोकिएको थियो ।
भदौ १५ गते, २०७६ - ११:३७ मा प्रकाशित
यी हुन् १७ खतरनाक एन्ड्रोइड एप, मोबाइलमा भए तुरुन्त डिलेट गर्नुहोस्
राजकुमार ह्यारीलाई बर्गर हाउसले कामको अफर गरेपछि सुभेच्छुकले जनाए विरोध
भिडन्तमा चार सिरियाली सैनिकको मृत्यु
अमेरिका र चीनबीच नयाँ सम्झौता, व्यापार-युद्ध खुकुलो हुने अपेक्षा
तल्लो सदनले माथिल्लो सदनलाई पठायो ट्रम्प विरुद्धको आरोपपत्र, अब के हुन्छ ?